Nagarik Shukrabar - १२ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पुरुष
शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०७ : १४
मङ्गलबार, २३ असार २०७७, ०६ : ३१ | शुक्रवार
केही महिनाअघि ३५ वर्षीया एक अविवाहिता कमला (नाम परिवर्तन) आफ्नो जिन्दगीबाट वाक्कदिक्क भइन्। आफ्नो समस्या न खुलेर कसैलाई भन्न सक्थिन्, न त चिकित्सककहाँ नै जान सक्थिन् ! कुनै पुरुष देख्नेबित्तिकै उनलाई काउकुती लागिहाल्थ्यो। उनलाई त्यो पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्ने चाहना तीव्र भएर आउँथ्यो। जीवनमा पहिलो पटक २१ वर्षको उमेरमा कुनै पुरुषसित अँगालोमा बेरिएयता कति जनासँग उनी सक्रियताका साथ रतिक्रियामा संलग्न भइन्, हिजोआज गन्न छाडिसकेकी छन्। यतिबेला भने उनलाई लागेको छ, उनलाई पक्कै कुनै रोग हुनुपर्छ, नत्र किन आफ्ना साथीभाइलाई नहुने प्रतिक्रिया उनको जिउले देखाइरहन्छ ? कमलाले साथीहरुसँग घुमाउरो पाराले आफ्नो समस्याबारे सल्लाह नगरेकी होइनन्, सबैले उनी ‘सेक्सुअल्ली एक्टिभ’ भएको प्रतिक्रिया दिए। यो सक्रियता तुलनात्मक रुपमा ‘अलि बढी’ नै भएको पाएपछि उनी चिकित्सककहाँ गइन्। विगत ६ महिना यता उनी उपचाररत छिन्। उनी अहिले पनि आफ्नो चाहना पूरा गर्न एक युवकसँग लिभिङ टुगेदरमा छिन् र ‘आवश्यक परेका बेला’ अन्य युवासँग सम्पर्कमा रहिरहन्छिन्। ०००